Shirkadaha xubnaha ka ah ee kayar 50 shaqaale, fursadaha cusub ee lagu bilaabayo tababarka waxaa u codeeyay Golaha Maamulka:
1. oo ka mid ah maalgelinta dhibaatooyinka caafimaadka kadib la heli karo laga bilaabo Julaay 1, 2020, Iyadoo la adeegsanayo Codsiga Kaalmada Dhaqaalaha (DAF) ee lagu gelayo aaggaaga xubin si loogu tababaro in la qabto ka hor Diseembar 31, 2020 oo ay ku dhacdo mowduucyada tababarka mudnaanta leh
La qabsiga deegaanka: la qabsiga guryaha, maareynta soo dhaweynta dadka kadib dhibaatada caafimaad, heerarka sharciyeynta cusub, iwm. (Marka laga reebo tababarka tilmaamaha carqaladda) Shaqada fog: abaabulka shaqada, maaraynta mudnaanta / maaraynta waqtiga ee shaqada, animation ee shirarka fog, QWL, maaraynta culeyska shaqaalaha, la qabsiga dhaqamada xirfadeed, iwm. Dib u milicsiga HR, maaraynta iyo abaabulka dhibaatada caafimaad ka dib, la qabsashada isbeddelka, animation of kooxaha fog, caafimaadka shaqada, … Dib u soo nooleynta waxqabadka: la qabsashada qalabkeeda maareynta, horumarinta qaabkeeda dhaqaale, soo nooleynta maaliyadeed,-Isgaarsiinta dhibaatada ka dib: isgaarsiinta dibadda ee xilliyada dhibaatada, dib uga fakarida xiriirinta isticmaaleyaasha iyo ka-faa'iideystayaasha xaalad caafimaadeed kadib. isticmaal shabakadaha bulshada, si wanaagsan ugula xiriiraan gudaha, aaladaha dhijitaalka ah: aaladaha iskaashiga, qaan-gaarnimada dhijitaalka ah,
Juun 29, 2020 Uniformation-ku wuxuu siiyaa qorshe soo kabasho xubnaheeda Si ay kaaga taageeraan dib u soo nooleynta howlahaaga, Uniformation-ka waxaa loo abaabulay inuu taageero barnaamijyada daraasad shaqo iyo dhameynta dhibaatada. July 10th, 2021Tranquillus
horeJulaay 24, 2020 Qorshaha soo kabashada dalxiiska: maxaa la qorsheeyay Maaddaama ay tahay meesha ugu horraysa adduunka ee dalxiiska, Faransiisku wuxuu arkayaa dhammaan qaybaha dhaqaalihiisa oo ay si ba’an u saameeyeen cawaaqib xumadii ka dhalatey aafadii Covid-19. Dawladdu waxay diyaarisay "qorshe kicin".
socdaAbuur bartaada si fudud adigu